Tag: mgbasa ozi akwụ ụgwọ | Martech Zone
Tag: mgbasa ozi akwụ ụgwọ
Kedu ihe bụ POE? Gwọ, Nwe, Ego… Na Amalite… na Converged Media
Wenezdee, Jenụwarị 13, 2021 Wenezdee, Jenụwarị 13, 2021 Douglas Karr
POE bu okwu achoro nye uzo ato nke esi ekesa ihe. Idgwọ akwụ ụgwọ, nke a na-akwụ ụgwọ bụcha atụmatụ dị mma maka iwulite ikike gị na ịgbasa iru gị na mgbasa ozi mmekọrịta. Akwụ ụgwọ, Nke Onwe, Ego Mgbasa Ozi Akwụ ụgwọ - bụ ojiji nke ọwa mgbasa ozi akwụ ụgwọ iji chụọ ahịa na ozi gbasara ika ahụ na ọdịnaya gị. A na-eji ya iji mee ka ị mata, gbasaa ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ yana iji mee ka ndị ọhụụ ọhụụ hụ ọdịnaya gị.
2015 State nke Digital Marketing
Satọde, Febụwarị 7, 2015 Friday, February 6, 2015 Douglas Karr
Anyị na-ahụ mgbanwe dị ukwuu na ahịa dijitalụ na ihe ọmụma a sitere na Smart Insights na-agbaji atụmatụ ndị ahụ ma na-enye ụfọdụ data na-ekwu okwu nke ọma na mgbanwe ahụ. Site na ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ, anyị na-ele ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anabata ọtụtụ ọrụ. Ọ fọrọ nke nta 6 afọ kemgbe m ulo oru m gị n'ụlọnga, DK New Media, na ụfọdụ ndị kasị mma gị n'ụlọnga nwe na ụlọ ọrụ dụrụ m ọdụ
Idgwọ, Ego na Ego Media: Nkọwa, Ndị na-ege ntị na atụmatụ
Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Nkwalite ọdịnaya dabere na ntanetị atọ 3 - mgbasa ozi akwụ ụgwọ, mgbasa ozi enwere na mgbasa ozi akwụpụtara. Agbanyeghị na ụdị mgbasa ozi ndị a abụghị ihe ọhụụ, ọ bụ ama ama na mgbasa ozi nke ndị mgbasa ozi nwere ma nweta nke gbanwere, na-agbagha usoro mgbasa ozi ọdịnala. Pamela Bustard, Media Octopus a kwụrụ ụgwọ, Nwepụta ma nweta Nkọwapụta Media Dị ka Media Octopus si kwuo, nkọwa ya bụ: Media Media - Ihe ọ bụla a kwụrụ iji kwalite okporo ụzọ iji nwee
13 Kachasị ewu ewu B2B Ọdịnaya Marketing Usoro
Monday, June 30, 2014 Thursday, July 3, 2014 Douglas Karr
Nke a bụ ihe na-akpali mmasị infographic na m chọrọ ịkọrọ site Wolfgang Jaegel. Ọbụghị naanị n'ihi na ọ na-enye nghọta n'ime ụdị azịza azụmaahịa nke ndị ahịa B2B na-etinye, mana n'ihi ọdịiche m na-ahụ na ọdịnaya etinyere yana ihe mmetụta nke atụmatụ ndị ahụ nwere ike ịbụ. N'ihe banyere ewu ewu, ndepụta a bụ mgbasa ozi mmekọrịta, isiokwu dị na weebụsaịtị gị, akwụkwọ akụkọ, blọọgụ, ihe omume mmadụ, nchọpụta ọmụmụ, vidiyo, isiokwu na
Jamballa: Blogger Outreach maka sdị
Mgbasa ozi Blogger nwere ike inye ụlọ ọrụ nyocha dị elu, ịmara ngwaahịa na nghọta dị mma, site na ịhazi ndị na-ede blọgụ na ụlọ ọrụ gị. Jamballa bụ ndị ọrụ blọgụ ọhụrụ na ndị ọrụ jikọtara ọnụ dabere na njirisi ha kwupụtara. Nke a pụtara na ndị na-ede blọgụ anaghị ewebata nsogbu na ngwaahịa ha na-enweghị mmasị na yana azụmaahịa jikọtara ya na ndị na-ede blọgụ chọrọ ịrụ ọrụ na ha. Jamballa na-enyekwa ndị ọrụ mgbasa ozi na-aga
Gịnị bụ Nkesa Ọdịnaya?
Ọdịnaya nke anaghị ahụ anya bụ ọdịnaya na-enye obere nkwụghachi na ntinye ego, yana, dị ka onye na-azụ ahịa, ị nwere ike ịchọpụtala otu o siri sie ike ịme ka ọdịnaya gị hụ ụfọdụ ndị na-ege ntị ị rụsiri ọrụ ike iji wuo n'ime afọ ole na ole gara aga. N'ụzọ dị mwute, ọdịnihu nwere ike ijide otu: Facebook na nso nso a mara ọkwa na ebumnuche ya bụ iji nweta ụdị ahịhịa na-eru nso
Jikọtara: Social Operating Platform
Otu dị na-enye teknụzụ azụmaahịa na ngwa ahịa nke na-enyere nzukọ gị aka ijikwa usoro ndụ ọhaneze na-elekọta mmadụ, na-eweta ROI doro anya na ọnụọgụ. Ngwurugwu jikọtara ọnụ na-enye usoro ndekọ maka usoro maka ụdị, ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa. Uru nke Platform Social Operating na-ejikọ aka ma jikwaa data azụmaahịa gị - Sistemụ Ọrụ Ndị A na-ejikọ njikọ niile ụlọ ọrụ, ndị na-ere ahịa na ụdị ị na-arụ ọrụ na otu usoro ahịa ahịa igwe ojii, na-enye gị echiche zuru oke banyere mmadụ niile